नेपाली विज्ञहरूको उल्टो बोली
जसै माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए भोलिपल्टै सेयर बजार झन्डै १५ प्रतिशतले उकालो लागिहाल्यो । कति अलोकप्रिय रहेछन् त माधव नेपाल यो नयाँ नेपालमा ? नेपालले पद छाड्ने बित्तिकै राजनीतिले निकास पाउँछ र अब नेपाल देशले विकासै विकास विकास पाउँछ भन्ने कत्रो विश्वास ? तर वास्तवमै त्यस्तै हो त ? नेपालले पद छोड्दा नेपालमा विकास नै हुन्छ त ?
गहिरिएर सोच्दा त्यस्तो देखिँदैन, किनभने नेपालका ठूला विद्वान् र विश्लेषकहरूले गर्ने गरेको भविष्यवाणी सबैजसो फेल खाने गरेका छन् । उदाहरणका लागि जहिले जहिले नेपालमा नामी बेनामी शेयर बजारका विश्लेषकहरूले बजार बढ्ने भविष्यवाणी गरेका छन् तबतब बजार घटेको र जबजब घट्छ भनेका छन् तबतब बजार बढ्ने गरेको छ । गएको दुई वर्षमा यसै साप्ताहिकमा पनि अब शेयर बजार बढ्ने आसयका केही दर्जन शीर्षकमा वरिष्ठ शेयर विश्लेषकहरूको विचार छापिएकै हुन् । तिनले भनेअनुसार बजार बढेको भए अहिले सेयरको भाउले सुनको भाउलाई छोएको हुन्थ्यो होला । तर हेर्नुस् अहिले कहाँ छ सेयरको भाउ ? अनि कहाँ छ सुनको भाउ ?
कुरो शेयर र सुनको भाउको मात्र हैन, नेपालका प्रायः हरेक क्षेत्रका विज्ञले भनेको कुरा प्रायः उल्टो हुने गरेको देखिन्छ । जस्तै मौसमविद्हरूले अब पानी पर्छ भने पानी पर्ने त छाडिदिऊँ छिटा पनि पर्दैन, अर्थशास्त्रीहरूले गर्ने गरेको अनुमानको त उल्लेख गरिरहन नपर्ला ।